कुनै बेला बेलायतलाई रु ५७ करोड ६० लाख दिएर सहयोग गर्ने नेपाल अहिले कसरी माग्ने भयो ? – Shirish News
नेपालका तर्फबाट चन्द्र समशेरले बेलायतलाई ५७ करोड ६० लाखको आर्थिक सहयोग गरेको इतिहास
-काङमाङ नरेश राई
पुरुषोत्तम समशेर जबरा (श्री ३ वीर समशेरका पनाति) द्वारा लिखित ऐतिहासिक पुस्तक “श्री ३ हरुको तथ्य बृतान्त भाग २” मा उल्लेख गरेअनुसार पहिलो विश्वयुद्वको शुरुवातसँगै नेपाल सरकारले, सन् १९१४ सेप्टेम्बरमा गोर्खालीलाई लडाइमा मेसिनगन खरिदका लागि २० हजार पाउण्ड नगद, लत्ता कपडा र खाद्यान्न लगायतका जिन्सीहरु बेलायतलाई सहयोग गरेको उल्लेख गरेका छन् । १७ हजार पाउण्ड चन्द्र समशेरले बेलायतलाई सहयोग गरेको देखिन्छ । सन् १९१४ मा १ पाउण्डको मूल्य ९७ पाउण्ड वर्तमानमा देखिन्छ । नेपाल सरकारका तर्फबाट चन्द्र समशेरले ३६ हजार पाउण्ड अर्थात ५७ करोड ६० लाख बराबर आर्थिक सहयोग गरेको बुझिन्छ ।
राणा कालमा बनिएका सिंहदरबार, चीनले बनाएको संविधानसभा भवनमा उनीहरु सिंगौरी हान्दै डुक्रिइरहेका छन् ।
सन १९४७ नोभेम्बर ७ तारिख कालो सन्धि भयो बेलायत र इण्डियावीच । त्यही सन्धिले गोर्खालीहरुलाई कुल्चिरहे २००६ सम्म । त्यसको दुई दिनपछि सन् १९४७ साल ९ नोभेम्बरको दिन भयो त्रिपक्षीय सन्धि । र, लगभग २५ हजार गोर्खालीलाई अझै थिचिरहेका छन् ।
गाउँका पाखा बेंसीहरुमा घाइते अनुहारहरु असरल्ल रहे । आफ्नो घाउ उपचार गराउन पाएनन् र सकेनन् घाइतेहरुले ।
गोली लागेको घाउको दुर्गन्ध सुँघ्दै बाँच्न विवश भए, ओखलढुङगाका इन्द्रबहादुर राई । लडाइँबाट नफर्किएको आफ्नो श्रीमान बाबुराजा लिम्बूलाई जीवनको उतरार्द्वसम्म पर्खिरहिन् पाँचथर आङ्नाकी शान्तमाया लिम्बूले ।
सन २०१४ सेप्टेम्बर २३ देखि दुई सय बर्षको सेलिब्रेसन मनाइरहेको छ बेलायत र नेपाल सरकारले । बिभिन्न प्रकारका कार्यतालिकाहरु सार्वजानिक गरिसकिएको छ । अपि्रल महिना सन् २०१६ का दिन सुगौली सन्धिका नाममा अन्तिम समय तालिका तोकिएको छ । के कस्ता सम्झौता गर्ने हुन् नेपाल सरकारले गोर्खालीको नाममा त्यस दिन ? या त उही ऐ ऐ मा हस्ताक्षर गर्लान् ? नभन्न सकिन्न ।
हजाराैं को संख्यामा अंगभंग भए । युद्वमा हराएका गोर्खाली नेपालीहरु बर्मा, इटाली, फिजी, बेल्जियम, इण्डियाजस्ता देशहरुमा विस्थापित हुन पुगे । त्यही डरलाग्दो इतिहास निर्माण गर्ने क्रममा विश्वको सर्वोच्च पदक भिक्टोरिया क्रस १३ जना गोर्खाली नेपालीहरुले पाउन सफल भए । तिनै योद्वा वीर गोर्खाली भिसीहरुका बहादुरी र वीरताले नेपाल राष्ट्रलाई विश्वमा चिनाउन सफल भए । आदिबासी लाहुरे र भिसीहरुको कहिल्यै नमर्ने एउटा इतिहासको वास्तविक साक्षी हो यो ….. । गोर्खालीको देश, चोमोलुङ्गमा उर्फ सगरमाथा उभिएको देश । र, बुद्धको देशले मात्र नेपालको पहिचान स्वीकार हुन्छ ।
तर, नेपालको पहिचान स्थापित गराइरहेका नामहरु पहिचानविहीन र गुमनाम भएका छन् । गोर्खालीको रगत, पसीनामा बनाएको केक काटेर नेपाल सरकार र बेलायतले दुई सयौं बर्षको शतवाषिर्की मनाइरहेको छ । डरलाग्दो दुःखभित्र हाँसिरहेका छन् उनीहरु ।
साभार ”२०७१ चैत १२ गते अनलाइनखबरमा प्रकाशित लेख” पानाखबरबाट ।
( राई ‘खुकुरीको धारमा दुई शताब्दी’ पुस्तकका लेखक हुन् )
चैतको पहिलो सातामात्र मन्त्रिपरिषद्को पूर्णता : सचिव भट्टराई